Tababare Solskjær oo hadalo kulul ku duqeeyay Liverpool kahor kulanka ka dhici doona garoonka Old Trafford – Gool FM
(Manchester) 20 Okt 2019. Waxaa iska cad in taageerayaasha kubadda cagta adduunka oo dhan ay ka war qabaan heerka ay gaarsiisan tahay cadaawada u dhexeysa kooxaha Liverpool iyo Manchester United, sidaas darteed indhaha oo dhan waxay ku sii jeedi doonaan maanta garoonka Old Trafford, oo marti galin doono kulanka la wada sugayo ee ka tirsan kulamada 9-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Liverpool ayaa raadineysa guusheedii sagaalaad ee xilli ciyaareedkaan si ay halkooda kaga sii wadaan dagaalka ay ugu jiraan hanashada koobka horyaalka Premier League, kaddib mudo 29 sanno oo aysan ku guuleysanin, laakiin kahor kulanka tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku duqeeyay kooxda Liverpool.
Wargeyska “Telegraph” ayaa soo xigtay haddalada tababare Ole Gunnar Solskjær kaddib wareysi uu bixiyay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa.
“Kooxdan kuma qanci doonto barbaro, waxaan kulankan ku soo gali doonaa si aan guul u gaarno, waxaan dooneynaa inaan dib ugu soo laabano wadada guusha, haddii ay tahay kooxda naga soo horjeeda Liverpool, Manchester City ama Brighton”.
“Waxaan ku kalsoonahay inaan soo laaban doonno oo aan ku guuleysan doonno koobka Horyaalka, waana hubaa inaanan sugi doonin 30 sano si aan markale ugu guuleysano Premier League”.
Sanadkii 1990-kii, Liverpool ayaa kaga sareysay kooxda Manchester United dhanka ku guuleysiga horyaalka Premier League waxayna ku kala guuleysteen xilligaas 18 iyo 7 jeer, laakiin haatan Red Devils ayaa hogaanka u heysa waxayna ku guuleysatay 20 koob oo horyaal ah, halka Reds ay wali heysato18 koob oo kaliya.
Haddii Manchester United ay maanta garaacdo Liverpool, waxay tallaabo wanaagsan oo jihada saxda ah u noqon doontaa tababare Ole Gunnar Solskjær iyo dhamaan ciyaartoydiisa, gaar ahaan kaddib markii ay la soo dhibtoodeen natiijooyin xun tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka.